Kalama mmiri, Tumbler, Mug - SUNSUM
Reusable No BPA Plastic Sports na Fitness pipụ Pull Top Leak Gosiri Na-arinkụ Spout Water Bottles BPA Free ahaziri logo na agba
Egwuregwu na ahụike dị mma Pee Top Leak Gosiri na-arinkụ mmiri ara mmiri BPA Free ahaziri logo
Reusable No BPA Plastic Sports na Fitness Afanyekwa Sere Top ihihi Gosiri Na-a Spoụ Spout Water karama emeputa
agụụ gwara mmanụ igwe anaghị agba nchara abụọ mgbidi ahaziri njem tumbler
500ml agụụ gwara mmanụ abụọ mgbidi tumbler
20oz Elu àgwà agụụ gwara mmanụ abụọ mgbidi njem tumbler na mkpuchi
N'ogbe 250ml njem kọfị mug na uwe aka silicone
N'ogbe 350ml njem kọfị Foto withlọ Nga na uwe silicone
Ahaziri 350ml plastic njem kọfị Foto withlọ Nga na silicone uwe
Microwave Egg esi mmiri ọkụ
Microwave Corn Steamer Cooker Microwavable Ndenye 2 Corn Container Easy Cook Cook Corn Kitchen Gadget
Nwee otu ọkachamara QC, usoro nyocha siri ike, ma nwee njikọ chiri anya na ụlọ ọrụ nyocha ọkachamara na ụlọ ọrụ nyocha iji nye ndị ahịa ngwaahịa dị elu.
Na ike OEM & ODM ike, n'elu imecha, logo ebi akwụkwọ na nkwakọ nwere ike ahaziri. Enwere ike hazie ebu ahụ dịka ihe atụ na eserese nke ndị ahịa nyere.
Nwere ihe karịrị afọ 10 nke ụlọ ọrụ ahụmahụ na ike zuru ezu na-enye ike chara INTEGRATION ike, nwere ike ngwa ngwa ịza chọrọ na-enye elu-ogo ọrụ.
Sunsum ezinụlọ Co., Ltd. emi odude ke Ningbo City, Zhejiang Province, nke bụ ihe dị mkpa ọdụ ụgbọ mmiri obodo na ndịda ọwụwa anyanwụ nke ụsọ oké osimiri China. Omenala ahia ahia nke mba ozo na uru nke ịbịaru nso n'ọdụ ụgbọ mmiri dị omimi emeela Ningbo obodo ahia mba ọzọ dị ike ma mepụta ụlọ ọrụ ndị ahịa mba dị ka ụlọ ọrụ anyị. Anyị ụlọ ọrụ a na-pụrụ iche iche iche ahịa plastic, ígwè na silicone ezinụlọ ngwaahịa na nkwado onyinye na mba ahịa ihe karịrị afọ 10. Ngwaahịa anyị gụnyere ụlọ ụlọ & usoro ị drinkingụ ihe ọ drinkingụ drinkingụ.